Golaha wasiirada Somaliland oo shirkoodii maanta kaga hadlay fayruska Corono | Caasimada Online
Home Somaliland Golaha wasiirada Somaliland oo shirkoodii maanta kaga hadlay fayruska Corono
Golaha wasiirada Somaliland oo shirkoodii maanta kaga hadlay fayruska Corono
Hargeysa (Caasimada Online) – Shirkii maanta ee golaha Wasiirada Somaliland oo uu shir gudoominayey Madaxweynaha Somaliland, ayaa waxa lagaga hadlayo arrimo dhowr ah, iyadoona si gaar ah diirada loogu saaray fayruska halista badan ee ka dilaacay dalka Shiinaha.
Golaha ayaa warbixin ka dhageystay wasiirka Caafimaadka, midaasi oo la xiriirtay habkii looga gaashaaman lahaa ka hortagga caabuqa Coronavirus, iyadoo madaarka magaalada Hargeysa lagu diyaariyay kooxo caafimaad oo baadha dadka ka soo dagaya.
Kulankaasi ay maanta yeesheen Golaha Wasiiradu oo ahaa Kalfadhigii 54-aad, ayaa waxa kale oo looga hadlay mashruuca horumarinta iyo maamul daadejinta Dawladaha hoose ee JPLG, sida lagu sheegay war ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland.
Hoos ka aqriso War-murtiyeed ay Madaxtooyadu ka soo saartay Kulankaasi:
“Fadhigii 54aad ee golaha wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland oo uu shir-guddoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, kuna wehelinaayey Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa lagu lafo-guray mashruuca maamul-daajinta dawladaha hoose ee Bulshada loogu dhaweynayo Adeegyada Aas-aasiga ah ee JPLG-ga iyo arrimo kale oo qaranka muhiim u ah.
Ugu horayn madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa golaha warbixin dheer ka siiyay mashruuca horumarinta iyo maamul daadejinta Dawladaha hoose ee JPLG oo laga maamulo xafiiska madaxweyne ku xigeenka, isagoo xusay marxaladihii mashruucu soo maray iyo sida dawladaha hoose uga faa’iidaystaan.
Madaxweyne ku-xigeenku wuxu tilmaamay in mashruucan oo dalka ka bilaabmay sannadkii 2008-dii Laguna bilaabay 8-degmo sannadkan 2020-kana lagu fidiyay 3-degmo oo cusub oo ah degmooyinka Ceergaabo, Laascaanood iyo Caynaba.
Dhinacooda masuuliyiin ka socday xafiiska mashruucan, ayaa golaha u soo bandhigay heerka horumarineed ee mashruucan iyo maamul-daadejintiisa oo lagu ballaadhiyay adeegga Aas-aasiga ah ee arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha, waxana mashruucani muujinayaa diyaarinta qorshaha degmooyinka iyo horumarka maamul-daadejinta, isaga oo door muuqda ka qaadanaya kor uqaadidda iyo koboca dhaqaale ee dawladaha hoose ee dalka.
Sidoo kale, wasiirka wasaarada horumarinta caafimaadka, ayaa golaha warbixin ka siiyey xaaladda guud ee caafimaadka dalka, isagoo dul istaagay diyaar garowga wasaaradda horumarinta caafimaadku ka gashay sidii looga gaashaaman lahaa ka hortagga caabuqa coronavirus, iyadoo madaarrada, dekedaha iyo xuduudaha dalka Jamhuuriyada Somaliland heegan buuxa la geliyay laguna diyaariyay kooxo caafimaad oo tababaran.
Wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay bulshada Somaliland ku baraarujinaysaa inay ilaaliyaan fayo-dhawrka iyo nadaafadda goobahooda waxayna wasaaraddu kaashanaysaa hay’adda caafimaadka Adduunka ee WHO iyo daneeyayaasha caafimaadka Somaliland.
Dhinaca kale, guddida arrimaha bulshada ee golaha ayaa warbixin qoto dheer golaha ka siiyay qorshaha dadka baahiyaha gaarka ah leh, iyagoo soo diyaariyay sidii dadkaas looga taageeri lahaa caafimaadka, waxbarashada iyo xirfadaha.
Ugu danbayn wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta Jidadka, ayaa golaha u soo bandhigay daraasadda gaadiidka dawladda isagoo iftiimiyay qorshayaasha loo dejiyay gaadiidka ee ilaalinta, dayactirka iyo tayaynta gaadiidka”.